Qorshaha Kenya AIRWAYS ee Somalia iyo khaadka maxaa ka dhaxeeya? (Aqri) | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Qorshaha Kenya AIRWAYS ee Somalia iyo khaadka maxaa ka dhaxeeya? (Aqri)
Qorshaha Kenya AIRWAYS ee Somalia iyo khaadka maxaa ka dhaxeeya? (Aqri)
Maamulka Diyaaradda Kenyan Airways ayaa ka hadlay arin la xiriirta in duulimaadyadooda ay ku imaanayaan magaalada Muqdisho uu qeyb ka noqon doono inay Khaat keenaan magaalada Muqdisho.
Kenya Airways ayaa la filayay in 5 December socdaalkeedii ugu horeeyay ku timaado Muqdisho balse ma aysan dhicin, Waxaana wareysi uu bixiyay Macharia Kamau uu ku sheegay in diyaaradda ay xooga saartay horumarka iyo safarkeeda cusub ee Nairobi iyo New York.
Masuuliyiinta diyaarada Kenyan Airways ayaa sheegay in marnaba uusan qorshaha ugu jirin inay Khaat keenaan magaalada Muqdisho, kaasi oo Kenya ay dhaqaalo badan ka hesho sanadkii.
“Wax Khaad ah “Miraa” ma ahan ahmiyadeena socdaalkaan. Waxaan dooneynaa inaan kordhino inaan qaarno macaamiisheena ka shaqeysa Soomaaliya iyo kuwa maalgashada, arinta kale ee soo raaci karta ayaa ah inaan abuurno fursado wada shaqeyn oo maalgashadayaasha, Ganacsatada iyo dalxiisayaasha ah”ayuu yiri masuulka u hadlay Kenya Airways.
Warar soo baxayay ayaa sheegaya in waxyaabaha la isku qabtay ay qeyb ka aheyd in diyaaradda ay dooneyso inay Khaat keento magaalada Muqdisho, waxaana diyaarado gaar ah ay khaatka keenaan Muqdisho.
Maamulka ayaa sheegay in todobo jeer ay isbuucii duulimaadyo ku tagi doonaan magaalada Muqdisho, balse hadda dib ayaa loo dhigay duulimaadyada diyaaradda ay ku imaan laheyd magaalada Muqdisho.
Waxyaaba keenay dib u dhaca duulimaadyada Muqdisho waxaa qeyb ka ah nooca diyaaradeed ee ay safarkooda u adeegsan doonaan, iyadoo shirkadda ay dooneysay in diyaarad horey dowlado baddan kaga diideen u adeegsato socdaalkeeda Muqdisho.
Previous articleSawirro:Paris oo Quful Albaab ah caawa iyadoo boqolaal ruuxna xabsiga loo taxaabay
Next articleWarbixin: Maxaa ku cusub doorashada Puntland 2019?
XOG:Turkiga oo jaray arin muhiimad weyn uleh dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed & Xiisada oo Cirka mareysa
DF oo amar culus ku soo rogtay xarumaha Qur’aan saarka ee Muqdisho + Sababta
DAAWO:Xil Fiqi”Dadka Yaanyuuro ma ahan waa in deg deg losoo daayo wiilka dowlada Uxiran(Waa kuma wiilka Xiran)
Xal laga gaaray xiisad maalmahan ka taagneyd magaalada Boosaaso
Sacuudiga oo Madaxda DFS & Musharixiinta ugu baaqay wadahadal xal lagu gaaro!
Sidee Ibraahim Maxamuud Maxamed “Gama’diid” u abaabulay weerarkii Xabsiga Dhexe?
DHAGEYSO: General Indho Qarshe Oo Bahdilay Shakhsiyaad Mas’uuliyiin Ah Oo Ciidanka Kala Heyb Sooca
Loolanka badda: Sidee UK, France, US iyo Norway ula kala safteen Somalia iyo Kenya?
Golaha Hoggaaminta beesha Habargidir oo war kasoo saaray xaaladda dalka
Ruushka iyo China oo ka aamusay cunaqabateyntii hubka ee lagu kordhiyay Soomaaliya